WAX-QABAD: MAXAY TAHAY, SIDA LOO SAMEEYO, SIDA LOO ISTICMAALO - BEEKEEPING
Maxaa iyo sidee loo sameeyaa?
Voshchina - Taariiqda Beeswax leh tirooyinka dheeraadka ah ee loogu talagalay dhismaha deg dega ah ee malab. Xaashidan waxaa lagu taagay qaab gaar ah oo lagu rakibay rugta. Naqshadani waxay ka caawisaa ka hortagga gumeysiga shinnida inay ka soo baxaan oo ay gebi ahaanba ku dhajiyaan. Gaaban, malabkii ma aha oo kaliya dammaanad ah goosashada wanaagsan, laakiin sidoo kale damaanad ah caafimaadka ee qoyska shinni. Mana suurtogal tahay inaan ka dhigno saxan isaga oo gacmihiisa ku leh guriga, waxaan ka sii fekereynaa dheeraad ah.
Waxyaabaha dabiiciga ah - malabkii, kaas oo loo isticmaalaa shinni ah si ay u ururiso lakabka malab. Waxaa intaa dheer, shinni shaqeynaya oo si madaxbannaan u dhisaya unugyada noocan oo kale ah oo loogu talagalay barxadaha, diyaaradaha iyo boqoradda. Haddii ujeedada dabiiciga ah ee malab ah waa la fahmi karo, ka dibna doorka ay beekhaamintu waa mid u qalantaa in la yiraahdo, sababtoo ah ma aha oo kaliya nolol raaxo leh beeska, laakiin sidoo kale si fudud u fududeeyaa shaqada beekeeper.
Sidaas, malab ah ee bees sameeyo kadib hawlaha:
waxay ballaarisaa buulka shinni ah;
waxay kor u qaadaan waxqabadka wanaagsan ee shinni;
waxay damaanad qaadeysaa dhismaha caadiga ah ee duufaanta shinnida guga.
Ma taqaanaa? Hal shin hal maalin ayaa dhisi kara ilaa afar kun oo unug.
Maxaa laga sameeyey?
Beesku wuxuu isticmaalaa mareegta malab iyo ubax si loo nadiifiyo unugyada. Hase yeeshee, dadku wax yar bay u socdeen oo waxay badaleen tiknoolajiyadda wax soo saarka
Sida caadiga ah, ee wax soo saarka isticmaalka malabkii wax cad. Waxyaabaha ugu fiican ee laga sameeyo waxa laga sameeyaa wax cadcad oo cad, taas oo si xor ah u dhalaalaya oo aan ka hadhin wax kale.
Waxyaabaha Honeycomb, dabcan, waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda. Ugu horreyn, waa jawi bey'adeed oo saaxiibtinimo leh. Marka labaad, bedelka noocan oo kale ah ayaa habboon oo sahlan in la isticmaalo. Saddexaadna, sababtoo ah baqshiimada leh qalabka noocan oo kale ah waa raaxo leh in la shaqeeyo, maadadu waxay leedahay dhibic yar oo baraf ah.
Maanta waxaa jira bedel aan wax dabiiciga ahayn - caag ah. Ku faa'iidooyinka waxyaabaha sida:
nolol wakhti dheer;
daryeel la'aan iyo kharashka dhaqaale;
ficil ahaan aan loo qaabeynin (ka duwan nooca wax-soo-saarka);
adiga ayaa sameyn kara.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay, beddelaadyo muuqaal ah oo caan ah ayaa la soo saaray 1869-kii, tan iyo markaasna waxay noqdeen kuwa caan ka ah beeraleyda.
Intaa waxaa dheer, malabyo caag ah ayaa si sahlan loo kaydiyo, maadaama ayan jebin ama jabin.
In kastoo ay fududahay isticmaalka, badeecada balaastigga ah ayaa hubaal ah yaraanta:
Waraaqaha waa in si joogto ah loogu daaweeyaa dulin iyo cuduro kala duwan (ugu yaraan saddex jeer xilli ciyaareed);
Ka hor inta lagu rakibo rugta, waa lagama maarmaan in la daboolo lakabka yar ee wax dhirta;
haddii dhaawacmay, aan la dayactiri karin, u baahan tahay bedel buuxa.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrisid faa'iidooyinka iyo waxyaabaha shinni loo isticmaalo ee loogu talagalay: maaddooyinka shinni, sunta iyo manka, propolis, zabrus, jelly boqollaal (soo saaro), homogenate.
Intaa waxaa dheer, xogta ku saabsan sida taarikooyinka dabiiciga ah loo arko beesku kuma filna. Haa, iyo walxo macquul ah mar walba ma aqbalaan shinnida.
By iyo ballaadhan, isticmaalka malabyada caag ah waa gebi ahaan la caddeeyey.
Xeerarka lagu dooranayo xaaqin
Dabcan, qalabka unugyada gacanta waa in si sax ah loo doortaa, maxaa yeelay labadaba tayada iyo tirada miraha iyo caafimaadka ee shinbiraha shimbiruhu waxay ku xiran yihiin. Marka, marka aad dooranaysid malab-yari waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso sifooyinka noocaas ah:
Ugu horreyn, maaddadu waa inay ahaato mid tayo sare leh. Tani waxay tixgelinaysaa awoodda iyo xajmiga unugyada.
Waxa kale oo muhiim ah in masaafada u dhexaysa dhinacyada isku midka ah ee unugyada ay isku mid yihiin (5.3-5.45 mm).
On saxanka lumen waa inuu noqdo mid hufan.
Cabbirka saxanka saxda ah waa 410x260 mm (for rugta badan, 410x190 mm).
Maaddadu ma ahan in ay noqoto mid faddareysan iyo kharajyada dibadda.
Baro sida loo sameeyo rugta ballaaran-rugta-doone-rugta.
Sida loo aasaaso gacmahaaga
Dad tiro yar ayaa ku faani kara in ay iyagu samaystaan ​​malab. Dhamaantood, waxaa lagu soo saaraa qiyaasta warshadaha ee shirkadaha loogu talagalay wax soo saarka maadooyinka, iyo mishiinno gaar ah oo loogu talagalay wax soo saarka cagaarka. Xaaladdan oo kale, cayayaanka ayaa dhaliya oo waxay galaan dhajinta wareegaysa. Taas ka dib, qiyaasta birta ayaa la dhex mariyaa saxan khafiif ah iyada oo loo marayo lakabyo leh qaabab la cayilay.
Waxaad isticmaali kartaa dhowr aaladaha malabku:
Si madaxbannaan, habka ugu fudud ee aad u samaysan kartid ama gawaarida gacanta.
Marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaatid in aasaaska ay tahay inuu noqdo tayada ugu sareysa oo ammaan ah. Sidaa darteed, soo saaridda waa in ay u hoggaansamaan sharciyadaas:
Duubka iyo qaybta shaqada ee qalabka waa inay noqdaan aluminium, oo leh lakab khafiif ah oo khafiif ah iyo nikkel.
Si aad u sameysid is-wax-soo-saarka abaaraha, waxaad ka iibsan kartaa sawir diyaar ah.
Si loo badbaadiyo qaab dhismeedka gacanta, waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato qalabka qaboojinta.
Cutubku waa inuu ku shaqeeyaa mabda'a birta.
Waa muhiim! Abuuritaanka xayndaab kasta oo cusub waxay ku mashquulisaa shinnida ka soo qaadashada malabka.
Si loo diyaariyo malabkii laftiisa, waxay qaadan doontaa dhowr macnaheedu waxa weeye: silikoon iyo xayawaan oo u adeega sida adag.
Waxa kale oo aad u baahan tahay saxaafad ama hareeraha guryaha oo leh dabeecado gaar ah.
Dhammaan qaybaha qalabka waa in la doorbidaa in lagu daaweeyo saliidda dharka leh.
Dhab ahaantii, soosaarka malabku waa nidaam sahlan, laakiin waa mid aad u xiisa badan.
First of dhan, waa in shimbir waa in la nadiifiyaa oo nijaar ah, isaga oo karkariya dhowr jeer in weel budo ah.
Waa muhiim! Ka dib habka nadiifinta, biyaha macaanku waa inay ahaadaan 1.5-2% (oo aan ka badaneyn). Tani waxay kuxirantahay nooca malabkii.
Cuntada ka dib marka la nadiifiyo waa la dhalaaliyaa biyaha qubeyska. Ka dib markaa, xaashida ayaa laga saaraa si ay u sameeyaan dheecaanka dhalada, oo ku faafaya qubayska.
Kadibna wuxuu kuduujiyaa si loo hagaajiyo tayada alaabta dhamaysay. Qodobbada kale ayaa ku wareegaya duubka, kaas oo siinaya qaab. Si aan waligeed u dhajin meelaha duuban, heerkulka xargaha waa la dhimay. Tani waxaa lagu sameyn karaa iyada oo la siinayo biyaha qabow qeybta.
Dhamaadka xaashida waxaa lagu qalajiyey xaalado dabiici ah.
Meelaha malabyada ku kaydi meel qallalan. Way ka fiican tahay in qashinka lagu duubo warqad qaro weyn oo ka fog qolalka dheeraadka ah. Isla mar ahaantaana, waxay isku dayaan in ay ka hortagaan kulaylka maaddada, maadaama ay cayayaanka si fudud u dhalaalayaan, iyo taargadu waxay ku dheggan yihiin kuleylka ugu yar. Iyo heerkulka ka hooseeya eber waa aan loo baahnayn.
Waa muhiim! Inta lagu jiro kaydinta, dhumucda malabku waxay kordhisaa 75%.
Hadda waxaad ka ogtahay wax badan oo ku saabsan aasaaska, waxa uu yahay, xitaa adiga ayaa sameeyn kara adiga oo aan haysan maalgalin maaliyadeed oo halis ah, samee bedelaad iyo caawin shaqaalahaaga.